सर्वश्रेष्ठ खेल चलचित्रहरू
खेलहरूको बारेमा सिनेमाहरू सबैभन्दा लोकप्रिय चलचित्र हुन्। लगभग सबै खेल चलचित्रहरू एक उत्कृष्ट कहानीमा आधारित हुन्छन् जुन दर्शकको ध्यान धेरै सुरुमा कैप्चर गर्दछ र कथाको अन्त सम्म जाने छैन।
खेलकुद चलचित्रहरूको साजिशलाई आवश्यक रूपमा वर्णन गर्दछ कि एथलीटले केही परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। चैंपियनको जीवन संघर्ष, अप र तलबाट भरिएको जीवन हो।
सर्वश्रेष्ठ खेलकुद चलचित्रहरू कथाहरू हुन् जसले दर्शकलाई अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्छ र प्रमाणित गर्दछ कि जीवनमा उनीहरूको बलियो इच्छाले गर्दा उच्च परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ।
सर्वश्रेष्ठ खेल चलचित्रहरूको सूची
खेल र एथलीटहरूको बारेमा हजारौँ चित्रहरू सिर्जना गरिन्, तर ती सबैहरू समान रूपमा रूचि छैनन्। सर्वश्रेष्ठ खेलकुद चलचित्रहरू छन्:
Jappl । आत्मकथात्मक फिलिपिन्स पियरे डोरानको जीवनको बारे बताउँछ, जम्पिंगमा उत्सुकता र उनको घोडा Jappl। पियरेले 1988 ओलम्पिकमा आफ्नो पहिलो गम्भीर विजय प्राप्त गर्नु अघि धेरै सहन थाल्नुभयो।
"क्रूर अंगूठी" । यो आत्मकथा चित्रमा सर्वश्रेष्ठ खेल चलचित्रहरू - नाटकहरूको सूचीमा समावेश गरिएको छ। यो फिल्मले अरब-यहूदी पृष्ठभूमिको साथ फ्रान्सेली बक्सेर विक्टर पेरेजको जीवन कथा बताउँछ। 14 वर्षको उमेरमा विक्टर बक्सिङमा रुचि राख्यो र 1930 मा उनी एक चैंपियन भए। युद्धको अन्त्य हुँदा एक खेलकुदको अन्त्य भयो, र विक्टर एचविट्ज गए। यस मृत्यु शिविरमा विक्टरले आफ्नो जीवनको क्रूरतम रिंगको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो।
रेस । यो फिल्म सूत्र 1 रेसर्सहरूको आकर्षक र अति साहसिक भरी भरिएको छ: अंग्रेज जेम्स हंट र अस्ट्रियाई निक्स लाउड। ट्रयाकमा विजयको लागि, रिक्टरहरू कुनै पनि लागि तयार छन्। उनको लागि सबै भन्दा स्वागतको स्वागत जापानी ग्रैंड प्रिक्समा विजय हो, जसमा ती तीव्रताले तयारी गर्दै छन्।
"मौरिस रिचर्ड । " यो आत्मकथात्मक फिल्मले तपाईंलाई प्रसिद्ध हॉकी खेलाडीको जीवनका कथाहरु संग परिचित गर्दछ। आफ्नो क्यारियर र धेरै चोटहरूको असफल प्रयासको बावजूद, मौरिस प्रसिद्धि हासिल गर्न र लक्ष्य को संख्या को लागि एक रेकर्ड स्थापित गर्यो।
कसरी आलस्यबाट छुटकारा पाउन प्रयास गर्नुस्?
ईर्ष्याबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नुहुन्छ?
कसरी शांत हुन र जीवन सुरु गर्न?
Socionic "Balzac" - पुरुष र स्त्री, वर्णन, उपप्रकार, कार्यहरू
एक व्यक्तिको सामाजिक स्थिति
LGBT - यौन अल्पसंख्यकहरूको प्रसिद्ध प्रतिनिधि के हो?
इन्टरनेटको फाइदाहरू र हर्महरू
प्रदर्शन को प्रकार व्यक्तित्व
आलस्यसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
नि: शुल्क सम्बन्ध
मानव शरीरमा शोरको प्रभाव
शरद ऋतुमा स्याउ रूखहरू रोपण
कला थेरेपी - अभ्यास
बर्ड रिजर्व डिक डेन्ट
लिंडा इयुङ्गेलैस्टा: "म एक दादी भए!"
ठण्डको लागि उत्तम औषधि
जाडोको लागि बोट्रो भरेर बिट्रोट भरियो
आहार "3 दिन3किग्रा"
पछाडीको साथको कोठा
खनिज पानीको लागि डुबली आटा
दूध माछा - राम्रो र खराब
आंतको एमआरआई कसरी भयो?
शुरुवातका लागि घरमा प्रजनन खरगोशहरू - उपयोगी सुझावहरू र चालहरू
कसरी बिरालोको बिरालोबाट हटाउनु हुन्छ?
फर कोट अन्तर्गत मासु
ठट्टा कला, वा यो सिजनले मोटरसाईकलहरूको लागि के सम्झना गर्नेछ?